राजधानीमै ढलले निल्यो बालिका ! MENU
राजधानीमै ढलले निल्यो बालिका ! गोपीकृष्ण ढुंगाना
82770 पटक पढिएको
तस्बिर : ढलमा बगेर ज्यान गुमाएकी विनिता फुयाल दाजु विजय फुयालसँगको तस्बिरमा। झंकनाथ फुयालको फेसबुकबाट। काठमाडौं : ‘एकछिन खेलेर आउँछु’ भन्दै जाने छोरीलाई सदाका लागि गुमाउनुपर्ला भनेर कुन बुबाआमाले सोच्लान् ? तर, राजधानी काठमाडौंको नेपालटारमा अव्यवस्थित ढलका कारण झंकनाथ फुयाँल दम्पतीले शुक्रबार साँझ छोरीलाई सदाका लागि गुमाउनुपरेको छ। फुयाँल दम्पतीले आँखै अगाडि पुतलीझैं यताउति गरिरहेकी छोरी ११ वर्षीया विनीतालाई गुमाउनुपरेको हो।
सामाखुसीमा पनिसामाखुसीमा शुक्रबार विद्यालयबाट फर्किएर सडकमा हिँड्दै गरेकी एक बालिका पनि ढलमा डुबेर केही बेर गायव भइन्। उक्त घटना यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। ढलले हुत्याएर एकछिनमै बृहष्पति विद्यासदनको कक्षा ९ मा अध्ययनरत सत्या सापकोटालाई केही पर पुर्‍याए पनि पैदलयात्रुले उनलाई उद्धार गरेका थिए।
हात्ती गाउँ पसेपछि स्थानीयमा त्रास 581
हेलिकोप्टरबाट उद्धारपछि जन्मिए जुम्ल्याहा शिशु 2855